Ogaden News Agency (ONA) – Colaadihii Qoomiyadaha oo Wali Itoobiya Kasii Socda.
Colaadihii Qoomiyadaha oo Wali Itoobiya Kasii Socda.
Posted by Dulmane	/ August 4, 2018
Wararka naga soo gaadhaya koonfurta wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya in qulqulatooyinkii bilahan halkaas kajiray ay wali halkoodii kasii socdaan, waxaana lasoo tabinayaa in ay dad aad ubadan kuwaxyeeloobeen dagaalada iyo daganaansho la’aanta halkaas kajira.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa bilihii lasoo dhaafay oo kaliya Gobolka Koonfurta Itoobiya kadhacay kasaare naf iyo maalba leh oo aad ubadan, waxaana lasheegayaa in ay Gobolkaas kubara kaceen dad aad ubadan oo shacab ah, mana jiro wax xal ah oo xukuumada gumaysiga Itoobiya ay kagaadhay arinkaas.
Dhinaca kale wakiilka Gumaysiga Itoobiya ee Gobolka Binshangul oo warbaahinta afka Gumaysiga lahadlay ayaa sheegay in ay waan waan kagaadheen dagaalada iyo khilaafaadkii udhaxeeyay qoomiyadaha Binshangul iyo Axmaarada oo mudooyinkii ugu dambeeyay uu dhex marayay dagaal culus oo keenay khasaare aad ubalaadhan.
Horjoogaha Gobolka Binshangul ayaa sheegay in ay qaqabteen dad kor udhaafaya 108 qof kuwaas oo sida uu hadalka udhigay dabada kariixayay colaada gaamurtay ee labada qoomiyadood udhaxaysa.
Wakiilka Gumaysiga Itoobiya ee Gobolka Binshangul oo hadalkiisa siiwatay ayaa sheegay in uu xilkii kaqaaday kumashineerkii Booliiska ee Gobolka Binshangul, kaas oo sida uu hadalka udhigay kufashilmay shaqadiisii.
Dhinaca kale hadhaagii kooxdii xilka laga xayuubiyay ee Wayaanaha ayaa geed dheer iyo mid gaabanba ufuulaysa sidii ay usii socon lahaayeen dagaaladii qoomiyadaha ee ay abuureen, waxaana ilaa iyo hada holcaysa colaadii laga dhex abuuray Soomaalida iyo Oromada.